यो संसारमामहानबन्न मन नलाग्ने र महानबन्ननचाहने मानिस कोइ पनिनहोला? सबै मानिस सहीवागलतकाम गरेर महानबन्न चाहन्छन् । मानिसकोे महानतालाई मापनगर्ने यन्त्रचाँहिकुनै वैज्ञानिकले नबनाएर पकृतिले बनाएकी रैछन् । त्यो महानताको मापनगर्ने सगरमाथाको चढाइले रैछ ।
एकपल्ट सगरमाथा चढेपछि कुनै पनिमानिसको महानतायसको उचाइजतिकै उक्लिएर जान्छ । जीवनभरि अरुलाई रुवाए, कुनै भलाइनहुने कामनगरे पनि केही छैन । बस जिन्दगीमा एकपल्ट अक्सिजनबोकेरै भएपनि सगरमाथा चढ्ना साथ मान्छे आपसेआपमहान भैजान्छ । भलै त्यो मान्छे सगरमाथाबाट फर्किदा गुल्टिएर यमराजको दरवार मै किननपुगोस् तर ऊ महानचाँहिपक्कै बन्छ ।
सिद्धार्थ गौतमको समयमा यो सगरमाथाभन्ने जिनिस थियो किथिएन?यदिथियो भने राजकुमार सिद्धार्थ बुद्ध बन्नकालागियति धेरै मीहिनेत गर्थेनन् होला? खुरुक्क सगरमाथा चढ्थे र त्यहीगएर केही घण्टा ध्यान गरेर फर्किन्थे अनिमहानकहलिन्थे । यत्रो ६, ६ वर्षसम्मतपस्या गरेर आफ्नो शरीर बित्थामै सुकाए सिद्धार्थ गौतमले ।
राजकुमारबाट योगीबन्न सिद्धार्थ गौतमले त्यति टाढा बिहारमा वरको वृक्ष मूनिगएर किनतपस्यागर्नु पर्थयो र ?मजाले लड्दै, पड्दै सगरमाथा चढ्थे र त्यहाँबाट ओर्लिने बित्तिकै महान घोषित हुन्थे । सगरमाथा चढ्नु भन्दा पैले चौरी गाईको गोठालो भएर हिंडने तेन्जिगँ शेर्पालाई कसले चिन्थ्यो होला । जहाँउनले सगरमाथाको शीखरमापाइला टेके उनीमहान घोषित भए ।
आहाकति सजिलो छ यो देशमामहानबन्नलाई ? बेकारमा मान्छेहरु साहित्य लेख्छन् ।
महानबन्नलाई कसैलाई बिचारले या व्यवहारले हान्नु पर्दैन । मात्र केहीलाख रुपैंया खर्च गरेर सगरमाथा चढे पुग्छ । त्यसपछिजतिपाप गरे पनिमाफी पाइन्छ ।
फलानावा ढिस्काना सगरमाथाआरोहीले यसो गरे र उसो गरे भनेर पत्रिकामा छापिने समाचारले त्यो व्यक्तिको महानताको ग्राफलाई झनै बढाइरहेको हुन्छ ।
भलै त्यो व्यक्तिले आफ्नो सामाजिकजीवनमा एक पल्ट रगतपनि कसैलाई नदिएको होस् ? तर सगरमाथा चढ्ने बित्तिकै ऊ महान र हिरो बन्छ । त्रेतायुगमाभगवान रामको पालामापनि सगरमाथाहुन्थ्यो भने भगवानश्रीरामले बाहुनको छोरा रावणलाई मारेर बम्हहत्याको पापबोक्थेनन् होला । सीतासँगबिहागर्न जनकपुर आएकैबेला त्यहीँबाट सीतालाई लिएर सगरमाथा चढ्थे र सगरमाथाको आधार शीविरमाहनिमूनपनिमनाएर एक पन्थ दो काजगर्थे होलान् ?
किनबिचरा भगवान रामलाई त्यत्रा राक्षसहरुलाई मारेर महानबन्नु पथ्र्यो न त सीतालाई रावणद्धारा हरिनु पथर््यो । राम, लक्ष्मण र सीतातिनै जनामिलेर पिकनिक जस्तो सगरमाथा चढ्थे र महानकहलिन्थे । शक्तिवाण लागेर लक्ष्मणजी बेहोश हुन्थेनन् न मेघनाथलाई नै मार्नु पथर््यो उनले ।
न त रामकाअनन्यभक्तहनुमानलाई रावणको लँका नै जलाउनु पथर््यो । हनुमानजी त झन उडेरै सगरमाथाको शीखरमापुग्थे र जय श्रीराम लेखेको झण्डा फर्फराउँथे होलान् ?त्यो बेलाको मीडिया अहिलेको जस्तो सुपर फास्ट नभएकोले नै राम, सीता, लक्ष्मण र हनुमानले सगरमाथाको बारेमाथाहापाएनन् । महाभारतमापनिजुवाको खालमाहार्नु भन्दा सगरमाथाजसले सफलतापूर्वक चढेर ओर्लिन सक्छ उसैले हस्तिनापुरको राज्यपाउनेछ भनेर बाजीलगाउथे होलान् ।
त्यस्तै महाभारतको युद्ध सकिएर थुप्रै वर्ष राज्यगरिसकेपछि पाण्डवहरु द्रौपदीलाई साथमालिएर जुनमहापन्थगएनफर्किने गरी । बिचरा पाण्डवहरुलाई सगरमाथाको बारेमाथाहाभएको भए त्यतै जान्थे र चढ्दा वाओर्लिंदा त्यतै प्राण त्याग गरेर महानकहलिन्थे होलान् ? तर त्योबेलाकापत्रकार नारदजीले सगरमाथाको प्रचार, प्रसार गरिदिएनन् ।
न त्यो बेलानारदजीसँग ईन्टरनेट, एफएम, अनलाईन, पत्रिका र अफसेट प्रेस थिएन । त्यहीभएर हिमालले ढाकिएको सगरमाथाको चुचुरो बिचरा कसैले देखेनछन् गाँठे ।
यहीकलियुगमाहाम्रो छिमेकमाजन्मेकामोहनदास करमचन्दगान्धीलाई पनिमहानताको यो सर्टकट फार्मूलाको कारेमाथाहै रहेनछ ।
त्यहीभएर त २ सय वर्षसम्मभारतमा राज्य गरेको अगे्रंजलाई त्यहाँबाट धपाउनअहिँसात्मकआन्दोलनपनिगर्थेनन् होला? सत्याग्रहवाअनशनको पयार्य बनेकातिनै मोहनदास जो पछि गएर महात्मागान्धीको रुपमाबिश्वविख्यातभए ।
यनले २१ दिनलामो अनशनपनिगर्थेनन् होला बेकारमा । गान्धीले मज्जाले खाइवरी माटोघाटो भएर लठ्ठी टेक्दै सगरमाथा चढ्थे र पछि आपसेआपमहानकहलिन्थे होलान् ? हुनसक्छ सगरमाथाको शीखर चुमेर फर्केपछि मोहनदास गान्धीको नामबद्लिएर महात्मागान्धीको ठाउँमा सगरमाथागान्धीबन्थ्यो कि?
आफ्नो मानवीयभावना र समाज सेवाकाकारण सन्तको उपाधीपाएकीमदर टेरेसाले साँच्चैको महानबन्न समाज सेवामाअनगिनतवर्ष खर्चिनु पर्यो ।
भोका, नागाँ, वृद्ध, अपागँ र अनाथहरुको आमाबनेर सेवा गरेकीअल्वानियामाजन्मेकीमदर टेरेसाले पनिथाहा पाइनछन् शायदकिमहानबन्नकुनै अरु महानकाम या समाज सेवागर्नु भन्दा सगरमाथा चढेर सजिलैसितमहानभएर ख्याति कमाइन्छ भन्ने ।
किनपसिनाबगाउने, किन समय खर्चिने अरुकालागि । जति सकिन्छआफ्नैलागि समय र पैसा खर्च गरेर जसोतसो सगरमाथा चढने । सगरमाथा चढ्दा वाओर्लिदां नै मरिहाले पनिशहीदको जस्तो सम्मान पाइन्छ र बाँचिहाले पनिमहानभएर दुनियाभरि नाम कमाइन्छ ।
महानबन्ने यति सजिलो काइदाथाहानपाएर अहिलेसम्मकतिले गार्हो बाटो हिंडे । बिचरा डा. गोविन्द केसीको स्वास्थ्य क्षेत्रको बेथीति सुधार गर्नकालागि ११ पटक सम्मअनशनमा बसे बेकारमा ।
खुरुक्कत्यो स्लाइनपानी झुण्डयाएर अनशनमा बस्नु भन्दा त अक्सिजनको सिलिण्डर बोकेर सगरमाथा चढ्या भएकति धेरै नामकमाएर महानबनिसक्थे होलान् ?
त्यसैले लोकमान, कूलमान, गगन, जनार्दन तथा सुशिलाहरुलाई मेरो एक करोड रुपैंया बराबरको निशुल्क सल्लाह छ छोड्नुस् समाज सेवा र देश सेवाको यस्तो गार्हो काम । सजिलो बाटो रोज्नुस् र आरामले कुनै तनावनलिएर आनन्दसित सगरमाथा चढेर महानबन्नुस् ।
यो देशकाजतिपनि गुण्डा, अपराधी र पापकर्म गरेका मान्छेहरु छन् ।तिनीहरु सबैले चोखिने र आफुलाई निर्दोष बताउनेएउटै माध्यमहो सगरमाथा चढ्ने ।
न्वारन देखिको भएभरको बल लगाएर सगरमाथा चढने र ख्यातिकमाउने अनिमहानबन्ने । हिजोसम्म कसैले नचिनेको गल्लिको कुकुर पनि सगरमाथा चढेपछि विशेष हुन्छ र चन्द्रमामागएको कुकुरझैं महान । सहारा मरुभूमिवा राजस्थानको गर्मी तथा पठारमाजन्मे, हुर्केको मान्छेले जस्तोसुकै गमीपनि सह सक्दछ । उसलाई अरबको मरुभूमिमा लगर राखिदिएपनि केही फरक पर्दैन ।
तर त्यही मान्छे हिमाली भेगमा बस्नुपर्दा उसलाई गार्हो हुन्छ उसले आफुलाई सर्वाइभगर्न सक्दैन । त्यसैगरि हिमालवा पहाडमा जन्मेको शेर्पा वाअन्य पहाडी मूलको मान्छेकालागिकुनै पनि पहाड वाहिमाल चढ्न अफ्ठ्यारो हुंदैन । ऊ खुशी, खुशी चढ्दछ तर त्यही मान्छेलाई सहाराको मरुभूमिवा राजस्थानको पठारमाबाँच्नगार्हो हुन्छ ।
तर एउटा पहाड वाहिमाल चढ्दैमाकोहीपनिव्यक्तिमहानहुनै सक्दैन । संसारमाथुप्रै पहाड र हिमालीचुचुराहरु छन् जसलाई यीपर्वत श्रृखँलाहरुसँग प्रेम हुनेहरुले चढछन् नै ।
त्यसोभए सबै प्रेमीहरु आफु वाआफ्नो प्रमी या प्रेमिकाको नजरमामहान र मायालु हुनसक्छन् तर अरुकालागि हैन । आफ्नो शौक वा रहर पूरा गर्न मानिसले जुन समय र पैसा खर्च गर्दछ उसलाई त्यसले फाइदा पुरयाउँदछ र चर्चित पनि बनाउँदछ तर महानभने पक्कै बनाउँदैन ।
महानहुकालागि समाज र देशको भलो हुने कुनै कार्य गर्न सक्नु पर्दछ जसलाई आगामि पिढींले पनि सम्झिन सकोस् ।
सगरमाथा चढ्नु कुनै पनिमानिसको सफलताको घोतकहुन सक्दछ तर महानताको ब्यारोमिटर पक्कै होईन् । सगरमाथाको उचाइलाई व्यक्तिको महानतासँगमापनगर्न थालियो भने शहीदको आत्माले सराप्नेछ ।